China Bougainvillea Bonsai eringlọ osisi na-emepụta ihe | Anwụ na-acha Ifuru
Bougainvillea Bonsai Okooko Osisi
Flowerdị ifuru Bougainvillea pere mpe, okooko osisi ndị ahụ na-etolitekarị na okooko osisi atọ. Agba dịkwa iche iche. Site na nhazi nke agba, ndị nkịtị bụ nnukwu uhie, acha ọbara ọbara, ọcha, agba odo, milky ọcha na agba ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. N'ihi agba ya na-egbukepụ egbukepụ, na-adọrọ adọrọ ma na-enwu gbaa, ọtụtụ ndị hụrụ ifuru n'anya hụrụ ya n'anya.
Asụsụ ifuru nke Bougainvillea bụ agụụ, nnọgidesi ike, na-eche ihu n'ihu. Ọ na-egosipụta ịnụ ọkụ n'obi, nnọgidesi ike na nnọgidesi ike.
Size dị: 30-200cm
Nkwakọ ngwaahịa: n'okwu osisi ma ọ bụ na ngwugwu ịgba ọtọ
Port nke Loading: Xiamen, China
Ofzọ njem: Site n'oké osimiri
Etiti oge: 7-15 ụbọchị
Bougainvilleaabụghị naanị na ọ mara mma n’ile anya ma na-achọ mma nke ukwuu, kamakwa ọ bụ akara ngosi ọdịnala n’onwe ya. Ndị mmadụ na-akụ Bougainvillea na ogige ntụrụndụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ụlọ ndị dị elu, na ahịhịa ma ọ bụ na-arị osisi vaịn n'akụkụ abụọ nke okporo ámá ahụ.
Bougainvillea na-arụ ọrụ dị mkpa na nchekwa gburugburu ebe obibi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma nwee nnukwu uru. Mgbọrọgwụ nke Bougainvillea ga-ejupụta ọla ndị dị arọ dị na ala ahụ, nke kachasị mma maka ịgwọ na ịsacha ala emetọ, ma nwee mmetụta nrụzi na ala. Tụkwasị na nke ahụ, uru nchekwa gburugburu ebe obibi nke Bougainvillea na-egosipụtakwa na nhazi osisi na ịma mma gburugburu ebe obibi. Enwere ihe omuma atu nke bougainvillea icho mma na ugbo na uzo abuo nke uzo. Ọ nwere ike ịmịkọrọ uzuzu dị na ikuku ma rụọ ọrụ na ahịhịa. A pụkwara ịmepụta usoro dị iche iche site na ịkpụcha ụdị okooko osisi na mkpịsị osisi, nke enwere ike iji chọọ ụlọ ahịa ma ọ bụ mpaghara ọfịs mma, nke nwere ike ịmepụta ọnọdụ dị ọkụ ma dị mma.
Nke gara aga: Adenium Obesum Desert Rose dọwara Adenium
Osote: Bougainvillea Spectabilis Ifuru Osisi N'èzí Osisi
Bougainvillea Ball Ọdịdị
Bougainvillea Na ite